बन्लिन् त प्रियंका गान्धी कंग्रेस अध्यक्ष ? spacekhabar
अध्यक्षबाट राहुल गान्धीले राजीनामा दिएसँगै अबको भारतीय कंग्रेसको नेतृत्व कसको पोल्टामा जाला यो बहसले भारतीय सञ्चारमाध्यम तातिएका छन् ।
भारतीय कंग्रेसको नेतृत्व कसले सम्हाल्छ भन्ने अझै टुंगो नलागे पनि महासचिव प्रियंका गान्धीको सम्भावना पनि बढेको केही राजनीतिज्ञहरुको भनाइ सार्वजनिक भएका छन् ।
राहुल र प्रियंका दाजुबहिनी हुन् । लोकसभा चुनावमा पार्टीको खराब नतिजाको जिम्मेवारी लिँदै अध्यक्ष पदबाट राहुलले राजीनामा दिएका थिए । यद्यपि कांग्रेस नेतृत्व (वरिष्ठ नेताहरु) ले अझै यो निर्णय गर्न भने सकेका छैनन् । भारतीय कंग्रेसको नेतृत्व अब कसले सम्हाल्ला ? प्रश्न टड्कारो उठिरहेको छ ।
नयाँ अध्यक्षका चयनका लागि कंग्रेसको 'वर्किङ समिति' बैठक यो साता बस्ने सम्भावना भने नरहेको दी इन्डियन एक्सप्रेसले छापेको छ । यही अनिश्चितताबीच कंग्रेसभित्र महासचिव प्रियंकालाई नै पार्टी अध्यक्ष बनाउनुपर्ने आवाज उठेको छ ।
अध्यक्षमा प्रियंकाको नाम अहिलेसम्म कसैले पनि खुलेर लिएका छैनन् । तर पनि पार्टीका नेताहरुले भित्री आशय भने प्रियंकाकै नाम छ । पूर्वकेन्द्रीय मन्त्री श्रीप्रकाश जयसवालले भनेका छन्, ‘धेरै नेताहरुले भनिरहेका छन् र मलाई पनि लाग्छ कि प्रियंकाजीलाई कांग्रेसको अध्यक्ष बनाउनुपर्छ । उहाँ गान्धी परिवारबाट हुनुहुन्छ । उहाँमा पार्टीको नेतृत्व गर्ने क्षमता छ ।’
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन १, २०७६, १२:४२:००